KISMAAYO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalooyinka Muqdisho & Kismaayo ayaa sheegaya in Taliyaha ugu sareeya ciidamada AMISOM ee kusugan Soomaaliya una dhashay dalka Itoobiya ee lagu magacaabo Lt. Gen. Tigabu Yilma Wondimhunegn, uu dib u dhacay safar uu ku tagi lahaa magaalada Kismaayo ee xarunta KMG ah Jubbaland oo ay ka dhacayso doorashada Madaxweyne-nimada maalinta berri ah.
Warar aan helnay ayaa sheegaysa in ay Jubbaland iyo howlgalka AMISOM ee Kismaayo wadajir ugu xireen sharuudo ku saabsan socdaalkiisa, gaar ahaana arrimaha ku aadan cidda ku soo dhaweynaysa madaarka magaalada Kismaayo.
Saraakiisha ciidamada Kenya waxay sheegeen in aysan aqbali doonin in ciidamada Itoobiya ay soo galaan garoonka diyaaradaha Kismaayo, balse uu taliyuhu imaan karro, waxayna sheegen in aysan jirin sabab gaar ah oo ay ciidamada Itoobiya ku yimaadaan gudaha Airporka.
Sidaas oo kale madaxda Jubbaland ayaa sheegtay in aysan baahi waqtigan loo qabo imaanshaha taliyaha guud ee ciidamada AMISOM Soomaaliya, balse doorashadu ay udhici doonto sidii loogu talogalay oo ay amniga sugi doonaan ciidamada AMISOM iyo kuwa Jubbaland.
Madaxda Jubbaland waxay kaloo su`aal galiyeen soo noqnoqadka taliyaha AMISOM iyo waxyaabaha ka soo khuseeya arrimaha doorashooyinka, waxayna cambaareeyeen talaabo kasta oo noocaas ku saabsan.
AMISOM,waxay wax ka sugaysaa amniga doorashada berri ka dhici doonta magaalada Kismaayo, waxayna sidaas oo kale door ku leedahay arrimaha kasocda Jubbaland oo ay ku jiraan xagga taageerada ciidamada Jubbaland.